Họrọ Zirconia-News-VSmile Co., ltd
Oge: 2021-05-24 ikwu:42
E webatara Zirconia n'ahịa na 2000s. Ọ bụ ike seramiiki etinyegoro n'ahịa n'oge ahụ ma webata ya dịka naanị ihe eji eme ihe. Ihe eji eme ihe bu ocha anya, di na nkpuru ocha di iche, ma tinye di nkpa maka unyi na ntanye.
Taa, enwere diski oge ochie dị ọcha, diski pre-shaded, ọtụtụ diski, na ike dị iche iche na ntụgharị. White diski dị mma maka obere na larịị labs n'ihi na ha nwere ike inwe obere ngwongwo ma nwee ike ịchịkwa ịkpụzi esthetics. Ntughari zirconia nke gara aga dị mma maka ụlọ ọrụ nwere nsogbu iji nweta ndo achọrọ mgbe ha sụsịrị, gbalịsie ike wepụta nkeji site na ndò, ma ọ bụ nwee nsogbu ọrụ ọrụ ma ọ bụ ọtụtụ mgbanwe. Ga-enwe akụrụngwa buru ibu karị mgbe ị na-arụ ọrụ na izizi ndo nke zirconia. Ihe omuma a bu ihe ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo, na ihe ndi ozo gha adi obere mgbe ha na egwe ihe nke putara ma oburu na inwe otutu igwe, tinye ihe ozo nwere ike baara gi uru. Multi-layered discs dị ka pre-shaded ma na elu esthetics.
Enwere ike ịkọwa diski Zirconia site na otu esi arụ ha, ọkachasị n'ụzọ abụọ dị iche iche; axial enwe ma ọ bụ isostatically enwe. Axial enwe diski na-eme site na ịnwụ. A na-edozi ntụ ntụ n'ime ọnwụ ma na-etinye ntụ ntụ na opekempe 30K PSI. A na-etinye ya na 900 ka 1000C na usoro ụbọchị 3.5. Zirfọdụ zirconia bụ sintered hotter n'ihi na a siri ike diski na ndị ọzọ na-sintered oyi na-akpata softer discs na nwere ike ịbụ ihe susceptible ka chipping. Mgbe diski disks ahụ gasịrị, a na-agba ha milled na ọdịdị nke ikpeazụ ha ma tinye ubu. Oyi nke isostatic na-agbanye ma ọ bụ CIP pụtara ntụ ntụ na-aga site na usoro axial a na-etinye ya wee tinye ọtụtụ diski n'ime arịa na-agbanwe agbanwe A na-etinye arịa a n'ime mmiri ma tinye mmiri n'okpuru ibu. A na-ebubata diski ọbụna nrịgo 360 n'akụkụ niile. mgbe, ha na-sintered yiri nke axial enwe discs. iji jide n'aka na homogeneous na otu njupụta nile, anyị niile zirconia discs aarụpụtara n'okpuru iche tinye.
Cos enwere otutu uzo di iche iche nke ahia na ahia, o nwere ike ibu ihe mgbagwoju anya mgbe ichoro ihe obula maka otutu ndi ozo nke ulo nyocha gi na emeputa. anyị na-akwado categorizing zirconia n'ime 3 isi edemede dabere na ike na translucency. Nke mbụ bụ High Translucency (HT) nke ike mgbanwe bụ 1350 MPa Nke abụọ bụ Super Translucent (ST) nke nwere ike mgbanwe nke 1200 MPa. N'ikpeazụ, ụdị nke mbụ bụ Super Translucent (UT) nke ike ntụgharị bụ 700 MPa.
Typedị nke ọ bụla nke zirconia nwere ebe pụrụ iche na ụlọ nyocha gị! Chaatị dị n'okpuru nwere ike inyere gị aka ikpebi mgbe ị kwesịrị iji ụdị ọ bụla nke zirconia maka ụdị mweghachi ị na-echepụta. Kọlụm aka ekpe bụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-achọpụta nke zirconia dị mma maka ikpe a kapịrị ọnụ gụnyere translucency, ikike nke ihe ahụ iji kpuchie ogwe aka gbara ọchịchịrị, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na akwa akwa ma ọ bụ na ọ bụghị, ikike ihe nwere layered ma ọ bụ micro layered, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na ngwongwo monolithic zuru oke ma ọ bụ na ị gaghị arụ ọrụ.
ụdị HT ST UT
Ntughari 37% 41% 49%
Ike ikpuchi ogwe aka ojii ezi ezi ogbenye
Bridge ngwa Ogologo Ogologo Nnukwu Bridge Ruo nkeji isii
Ike iji aka ya Mba Ee Ee
Ngwongwo ngwongwo zuru ezu Ee Ee Ee
egosi Framworks, Ipomi, Hybird omenala abutments, ịghasa-nọgidere na okpueze Nnukwu àkwà mmiri, otu ụlọ na-esote otu, ihe niile na-egosi mgbe ị na-ete ya All otu nkeji, Best materilas maka anteriors, obere akwa
Nke a bụ naanị ntuziaka akwadoro. All Bridgework ga-enwe ezigbo njikọ njikọ na cantilevers ga-atụle mgbe na-eji HT ma ọ bụ ST ma e wezụga nke nwere ike a obere n'akụkụ incisor.
Mgbe ị na-ekpebi ụdị zirconia ịchọrọ iji na ụlọ nyocha gị, ị kwesịrị ịhọrọ mgbe niile nke dị mfe iji, mgbapụta na-eguzogide ọgwụ, nwere usoro nrụpụta na-agbanwe agbanwe, ọ dịkwa ọnụ ahịa ma ọ bụchaghị dị ọnụ ala n'ihi na ọ kwesịrị inye nnukwu uru onye ahịa gị, na n'ikpeazụ, ị nwere ike ịnweta nkwado ngwaahịa mgbe ọ bụla ịchọrọ ya.
PREV: 3, 4, 5 AXIS Dental Milling Machine
OSOTE : White Zirconia, Ihe Ndị Na-acha Eji Eji Eji Egwu, Nke Kwesịrị Ekwesị maka gị?
Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Zirconia Block dakọtara na Open System